Izindaba - Ungalungisa kanjani ukunemba kwesitimela somhlahlandlela wesikhungo semishini esime mpo se-CNC?
Ungalungisa kanjani ukunemba kwesitimela somhlahlandlela wesikhungo semishini esime mpo se-CNC?
Lapho amakhasimende esebenzisa isikhungo semishini esime mpo se-CNC ukuze abone ukucutshungulwa, avame ukuhlangana nokunemba kwesitimela okungazinzile noma ezinye izimo.Ngalesi sikhathi, badinga ukulungisa ujantshi ngesikhathi.Phakathi nayo yonke inqubo yokulinganisa, naka izinkinga ezintathu ukuze ugweme ngempumelelo ukwenzeka kwesitimela.s umonakalo.
I-1) Cabangela amandla omshini wesendlalelo sokulungisa ngokwayo kanye nendawo yokusebenza yangempela yesitimela somhlahlandlela.Ngokuphathelene nomehluko phakathi kwezindinganiso ezamukelwayo, ukusebenza, kanye nendawo yokusebenza, lapho kulungiswa, ukulungiswa kwe-welding kanye nokulungiswa kokunamathela kufanele kwenziwe ngokuvumelana nesimo sangempela, futhi izindlela zokulungisa ezithuthukisiwe nezindlela zenqubo kufanele zisetshenziswe.
2) Cabangela ukuthi ingabe inqubo yokukhetha inomthelela ekunembeni nasezimpahleni zemishini zesitimela esiqondisayo.Uma ithintwa izinga lokushisa, noma izobangela ukuthi ujantshi oqondisayo uwohloke, noma uzoshintsha amandla emishini kanye nobulukhuni bobuso bukajantshi oqondisayo.
I-3) Cabangela inqubo yokulinganisa ekhethiwe kanye nokufaneleka kwempahla kaloliwe yomhlahlandlela.
I-perpendicularity kanye nokufana phakathi kwama-rails aqondisayo kanye nokuqondisa kwesitimela esiqondisayo endizeni kuzothinta ukunemba kwejometri yesikhungo semishini eqondile ye-CNC.Ukunemba komzila wesitimela nakho kuyinkimbinkimbi kakhulu.Izakhiwo ezibonakalayo, ukwakheka, nezinto zokwakha zonke zizonquma ukunemba kwesitimela somhlahlandlela..
Umthelela wokunemba okuvundlile esikhungweni semishini esime mpo se-CNC ungafingqwa kulawa maphuzu amathathu alandelayo:
1. Uma izinga lingafinyeleli ebangeni elishiwo, isikhungo somshini esime mpo se-CNC sizobangela ukuguqulwa kwesitimela esiqondisayo phakathi nomsebenzi wesikhathi eside, futhi ukuma kwezimbazo X kanye no-Y nakho kuzothinteka.
2. Ngemva kokuba umzila wesitimela ukhubazekile, ithebula lokusebenza nalo lizokonakala.Kulesi simo, ukuma kwe-spindle kanye ne-worktable nakho kuzoba kubi kakhulu, futhi umphumela uzothinta ukunemba kwemishini yendiza yesikhungo somshini esiqondile se-CNC.
3. Impilo yesevisi iyonke yesikulufu somhlahlandlela kanye nesikhungo somshini esime mpo se-CNC sizoncishiswa.
Siyakwamukela ukubonisana nezikhungo zethu zemishini eziqondile ze-CNC: vmc420, vmc7126, vmc550, vmc650, vmc850, vmc1060, njll. Sineminyaka engu-20 yesipiliyoni sokukhiqiza futhi sihlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu namasevisi asezingeni eliphezulu.